Sheeko Xikmadeysan: Waxaan Soo Ag Maray Qubuuraha Waxbaana Soo Arkay, Wixii Kala Qabsaday Reer Maan..!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: August 28, 2014, 12:04 am
Wuxuu u shaqeeyaa laanta dib-u-dejinta ee Qaramada Midoobay. Oo uu dhex fadhiyay xafiiskiisa xerada qaxootiga ku yaallay. Islaan iyo wiilkeeda ayuu ballan la lahaa. Saa waqtigii loogu tala-galay ayay ka soo hormareen, isagiina wuu qaabilay.
“Soo dhawaada,” ayuu yiri isaga oo aan kor u eegin, “ii fariista.”
“Waan dhownahay, mudane” ayay tiri islaantii oo hinraageysa.
“Waxaa kaa muuqato cabsi,” ayuu yiri ninkii oo kor u eegaya islaantii, “ha cabsan. Su’aaluhu ma adko.”
“Maya su’aalaha kama cabsi qabee waxaan soo ag maray qubuuraha,” ayay tiri islaantii oo fariisaneyso, “waxaan ku soo arkay qof aad reer aakhiraad mooddo—oo misana si baas ii eegay.”
“Ka soco,” ayuu yiri ninkii. “Su’aalaha ayaan billaabayaa. Horta magaceygu waa Maan Dhoofeen. Arjigiinna waa kan. Norway ayaa haatan qaadaneyso qaxooti cusub.” Intii uu hadlayay wuxuu arkay islaantii oo isaga ku dheygagsan. Wuxuu yiri, “See wax u jiraan?”
Sayte: “Maan Dhoofeen maxaa laguugu baxshay?”
“Mayee waa neynaas un,” ayuu la soo booday. “Calaashaan qolyo ila kaftameysaa igu tiri dibedda kama aadan soo baran sida loo dhiso dal iyo dad. Waxay igu dhaleeceeyeen inaan ka soo bartay sida mashruucyo looga sameeyo hoogga iyo halaagga Soomaaliya. Marka waxay igu dheheen waxaa la ii qaatay in aanan markii horeba dibedda u dhoofin.”
“Gartay,” ayay tiri islaantii oo afka maroojineyso.
“Haye,” ayuu yiri Maan Dhoofeen, “diyaar ma u tihiin su’aalaha?”
“Haa, haa, diyaar,” ayay la soo boodeen islaantii iyo wiilkeeduba.
“Haye, bal magacyadiina ii sheega,” ayuu yiri Maan Dhoofeen oo eegaya arjigii miiska u dul saarnaa.
“Aniga waxaa la i dhahaa Maan Guursadeen,” ayay tiri islaantii. Saa Maan Dhoofeen iyo wiilkiiba hal mar ayay wada eegeen islaantii, lana yaabeen.
“Laakiin magaca kuu qoran waa Luul Xaaji,” ayuu yiri Maan Dhoofeen.
“Iska daa kaas,” ayay tiri islaantu, “hadda laga billaabo magaceygu waa Maan Guursadeen.”
“War wiilyahow adiguna magacaa?” ayuu yiri Maan Dhoofeen. “Soo Abshir ma ahan?”
“Maya,” ayuu la soo booday wiilkii, “ii qor Maan Dhasheen.” Saa ninkii iyo islaantii oo anfariirsan ayaa hal mar wiilkii wada eegay.
“War bal eega caasigan!” ayay tiri Hooyo Maan Guursadeen. “Haddaan ogahay inaad horteyda sidaan ka oran doontid sagaal bilood caloosha kuguma sideen, ee waan iska kaa soo xaaqi lahaa.”
“Hooyooy waxaad i soo xaaqday markaad isku magacowday Maan Guursadeen,” ayuu la soo booday wiilkeedii Maan Dhasheen.
“Horaa loo yiri labaatan jir inta geed ka booduu talana ka boodaa,” ayay tiri Hooyo Maan Guursadeen. “Dhaadhaankiyow waxaan islahaa magacaas ku quruxso arjiga dib-u-dejinta, oo buunbuuni jaceylka aan u qabo ninkaygii la iga dilay. Balse waad fududaatay.”
“Haye, haye,” ayuu yiri Maan Dhoofeen, “naga joojiya isqabqabsiga. Su’aalaha iga dhageysta.”
“Haye soo daa,” ayay wada yiraahdeen islaantii Maan Guursadeen iyo wiilkeeda Maan Dhasheen.
“Goormaad ka soo qaxdeen Soomaaliya?” ayuu yiri Maan Dhoofeen.
Hayeeshee markii ay su’aashaas afkiisa ka soo dhammaatay ayaa nin soo istaagay iriddii xafiiska ee xigtay dhabarkii wiilka iyo hooyadiisa. Ninku wuu madoobaa, oo sidii qori qallalay caato ahaa. Timo raamo ah ayuu lahaa, indhihiisu god ayay ku jireen, goonkiisuna wuu muuqday. Ciddiyihii way ku baxeen. Wuxuu xirnaa labo qeyd oo ku dul dhammaaday. Wuuna cago-caddaa.
Maan Dhoofeen inta ninkii eegay ayuu yiri, “War ninku ma aakhiruu ka yimid? Walaal ma ballan ayaad laheyd? Magacaa?” Waxaa gadaal soo jalleecay islaantii Maan Guursadeen iyo wiilkeedii Maan Dhasheen—mise afkii ayaa islaantii kala tegay. Oo ay kursigii fadhin weysay. Argagaxdayna.
“Magaceygaa?” ayuu yiri ninkii oo dhankoodii u soo tallaabsanaya, “Magacaygu waa Maan Dhinteen.”
Saa sidii ido bahal u galay ayay hal mar kala dideen. Maan Dhoofeen daaqaddii ayuu iska tuuray—jilbahana ka murxay. Isagoo kufaa-dhacleynayana sii orday. Waxaa ku xigsatay islaantii Maan Guursadeen oo iyana sidii wiil badda dhex quusayo inta gacmaha hor marsatay ayay si xarrago leh uga dhex boodday daaqaddii—xagtinna ma gaarin. Cagta ayay wax ka dayday, dibna uma aysan soo eegin wiilkeedii Maan Dhasheen.
Iyadoo ordeyso ayay sidii hillaacii ku dhaaftay odaygii Maan Dhoofeen. Intuu yaabayuu ka daba yiri: “Naa hoogto dheereysidaa?” Saa iyadoon dib u eegin ayay ku qeylisay: “Adiguba caqlaad leedahee carar maxaa dhaamma?”